प्रधानमन्त्रीलाई फेरि कस्ले दिने भए मिर्गौला? जान्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रधानमन्त्रीलाई फेरि कस्ले दिने भए मिर्गौला? जान्नुहाेस्
फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नका लागि भान्जी नाता पर्ने महिलाले मिर्गौला दिने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल स्रोतका अनुसार मिर्गौला दिने ती महिलाको गोपनियताका कारण परिचय भने खुलाइएको छैन। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा बुहारी अन्जनासँग म्याच भएको थियो । ओलीको पहिलो मिर्गौला प्रत्यारोपण १३ वर्षअघि दिल्लीमा भएको थियो ।
दोस्रो प्रत्यारोपण भने देशभित्रै शिक्षण अस्पतालमा गर्ने चाहना प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि प्रधानमन्त्री ओली सोमबार अस्पताल भर्ना हुँदैछन्। आउने बुधबार उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने छ। यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा जानकारी गराएका थिए।